Geesiyaasha WTN ee ka socda 128 Waddan ayaa Jecel Kenya: Suuqa Socdaalka Adduunka ee London ayaa ka yeeli doona
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wtn » Geesiyaasha WTN ee ka socda 128 Waddan ayaa Jecel Kenya: Suuqa Socdaalka Adduunka ee London ayaa ka yeeli doona
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Kenya • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wtn
Waxaa jira kumanaan geesiyaal ah oo ku jira safarka iyo warshadaha dalxiiska adduunka oo dhan. Waxaa jira xirfadlayaal dalxiis oo wax walba ku waayey COVID. Badana waa qarsoodi. Halyeyga WTN ee nool waa Halyeyga Dalxiiska ANONOMYOUS!
Kulankii ugu horreeyay ee shaqsi ahaan loo qabto Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa lagu qorsheeyay Bandhigga Ganacsiga Safarka Adduunka ee ugu horreeyay tan iyo aafada, the Suuqa Safarka Adduunka ee London.
Halyeygii ugu horeeyey ee ay WTN aqoonsato waxa uu ahaa masuulkii u qaabilsanaa Dalxiiska Kenya Wasiir Najib Balala.
Tani waa fursad aad kula kulanto qaar badan oo geesiyaal ah iyo Xubnaha WTN in qof ka dib ku dhawaad ​​2 sano oo shirar zoom caan ah.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxa ay ku casumaysaa ka qaybgalayaasha ka soo qayb galaya Suuqa Socdaalka Adduunka ee London si ay uga soo qaybgalaan Soo dhawaynta Geesiyaasha Dalxiiska oo ay la kulmaan geesiyaal badan oo dalxiiska ah oo ka qayb galaya bandhiggan ganacsi ee ugu weyn ee caalamiga ah ka dib markii uu cudurku bilaabmay.
Saddexdii geesi ee ugu horreeyay WTN ee la aqoonsaday waxay ahaayeen Mudane. Najiib Balala Kenya, Hon. Edmund Bartlett oo u dhashay Kenya, iyo Dr. Taleb Rifai oo hore u ahaan jiray Xoghayihii Guud ee UNWTO oo u dhashay dalka Jordan. Saddexduba waxay ku biiri doonaan Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee ku taal Magical Kenya Stand ee London.
Kenya waxay noqon doontaa martigelintii ugu horreysay ee kulankan fool ka fool ah ee geesiyaasha iyo xubnaha WTN intii lagu jiray WTM ee London.
Kenya Stand AF245 waxay noqon doontaa goobta isniinta, Noofambar 1, 4.00 galabnimo
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa websit dhacdo geesiyaale
“Kenya waa saaxiibka dhabta ah ee dalxiiska caalamka. In ka badan 200 oo shirar zoom ah ka dib qaar badan oo ka mid ah xubnaha WTN waxay noqdeen saaxiibo wanaagsan.
Geesiyaashayadu waxay na siiyeen dhiirigelin si aan uga gudubno caqabado badan. Ma sugi karo inaan si shakhsi ah ula kulmo qaar ka mid ah geesiyaashayada iyo xubnaha asxaabta.
WTN hadda waa 128 waddan iyo in ka badan 1000 xubnood oo xoog leh.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka Kenya waxay u noqon doontaa xarunta Suuqa Socdaalka Adduunka ee London.
Dhammaan asxaabta Kenya, Dunida Dalxiiska waxay ku hanweyn yihiin w geesigayada koowaad, Hon. Najib Balala, Xoghayaha Dalxiiska ee Kenya. Runtii wuu helayaa!